You are here: Home / Qalabaynta Dib-u-warshadaynta / Baytariyada / Bixinta qashin-qubka! Maqnaansho lagama maarmaan ah
Wuxuu ku dhashay 1950 ee Sétif, Farouk Tedjar wuxuu ka qalin jabiyay Machadka National Polytechnique de Grenoble. Waxay abuurtaa bilawga Recupyl ee 1993. 2012, waxaa loo doortay inuu ku guuleysto abaalmarinta abaalmarinta soo saaraha Yurub. Nidaamka shaybaarka ah ayaa ka soo kabanaya 98% qalabka lithium-ion.
Ma jiraan nidaamyo aad u badan oo aad ka heli karto shabakada oo xoogga saaraya dib u warshadaynta batariyada telefoonka gacanta. Tan ugu sareysa, inta badan haddii aaney dhammaantood ku salaysnayn hal mabda ': Beteriyada waa in la dhalaaliyaa si loo bilaabo hannaanka dib u soo kabashada.
Nidaamkan, oo ay soo saareen Farouk Tedjar iyo Jean-Claude Foudraz oo ka yimid Faransiiska, uma baahna inay bamgaraystaan ​​dhammaantood. Nidaamka dib u warshadaynta waxaa lagu sameeyaa heerkulka caadiga ah. Shirkadda, waxay bilowday sannadihii 19. Shaqaalaha 24 ee Faransiiska, oo ku saabsan 50 aduunka oo dhan. Suuqyada 2009 waxay ku dhawaadeen 1 million euro oo ku yaal 2009; maanta waxay ku dhowdahay 4 million milyan euros.
Marar badan maahan warar cusub "cusub", laakiin habka dib u cusbooneysiinta batroolka unugyada ayaa ah xal fantastik ah oo loogu talagalay naga yar yari! Ku dhowaad sanadaha 20 ee samaynta, waa maxay ceeb!
Waxaa jira malaayiin iyo malaayiin ka mid ah batteriyada unugyada adduunka oo dhan
Waxaa jiri doona beteriyo badan oo badan sida unugyada adduunka oo dhan waxay iibinayaan sida waalan
Dib-u-warshadayntu waa habka lagu tago, ma aha oo kaliya sababtoo ah waxay u wanaagsan tahay Dunida Dunida laakiin sidoo kale waxaa jira lacag lagu sameeyo
Raadi nidaam dib-u-warshadeed oo hooseeya oo leh hannaan yar ama ka hooseeya hawada
Maqnaanshaha beteriga gacanta ... haddii ay suurtogal tahay
Geedi socodka oo aan lahayn wax ka boodi kara bateriga
Qaadasho CO2 xadidan
Isticmaalka tamarta hooseeya
Saamaynta saamaynta deegaanka
Qiimaha dib-u-warshadaynta sare
Habka loo isticmaalo badeecadaha - Farouk Tedjar iyo Jean-Claude Foudraz (France)
Farshaxan Yeelan Yahay 2012 - Farouk Tedjar (Faransiiska)
Websaytka Compagny - Recupyl
Qodobbada Faransiiska - Farouk Tedjar, oo ah laba qofood
Qodob Muhiim ah oo ku saabsan Badeecadaha dib u-cusboonaynta - Sida loo Isticmaalo Batteriyada
Documentation – Mashruuca Fikradaha Fikradaha Dheeraadka ah